Sidee looga gudbi karo Nidaamka awood qeybsiga beelaha ee 4.5? – SOMA: Somali Media Association
Nidaamka awood qeybsiga 4.5 oo ay Soomaalidu heshiis ku ahayd ku dhawaad 20-kii sano ee lasoo dhaafay, waxaana ay ahayd shirkii geedi-socodka nabada Soomaaliya ee Carte (2000).
Dhammaan bulsho weynta Soomaaliyeed waxay si isku mida u tuhuntey islana garatey xog-la’aanta nimaadkan uu ku suleysan yahay.
Hadaba Maxamed Qadar Cabdi oo ka tirsan Radio Himilo ayaa ka wareystay Xildhibaan hore haddase ah Gudoomiye ku xigeen ka 1-aad ee Xisbiga Midnimo Qaran Ibrahim Saalax Deyfullah Sida looga gudbi karo Nidaamka awood qeybsiga beelaha ee 4.5.
Halkaan Hoose ka dhageyso Wareysiga oo dhammeystiran